Madaxda Mareykanka oo u diyaar garoobaya xaalladi ugu xumeyd ee dharbaaxada cudurka Covid 19. - Jowhar Somali Leader
Home News Madaxda Mareykanka oo u diyaar garoobaya xaalladi ugu xumeyd ee dharbaaxada cudurka...
Madaxweyne Donald Trump iyo la Taliyihiisa dhanka coronavirus ayaa sheegay in qaybo Mareykanka ka mid ah ay u diyaargaroobaan meeshii ugu sareysay ee qasaaraha Covid 19.
Hadalka Donald Trump ayaa ku soo aaday ka dib markii uu Madaxa Caafimaadka ee Ciidamada uu sheegay in todobaadkan uu noqonayo mid ku biira taariikhda masiibooyinka qaranka Maraykanka, uuna ka dhib badnaan doono weeraradii Dekada Pearl Harper iyo Sept 11.
Bal aanu jaleecno halka ay mareyso dadka laga helay cudurka Covid 19. Guud ahaan waxaa cudurka uu asiibay, 338,112.
Dadka udhintey waxa ay marayaan 9,654 qof. Halka ay ka buskoodeen 18000.
Warbixino hordhac ayaa sheegayo in cudurka Covid 19 uu si ba-an u galey bulshada madow ee Mareykanka. Inkasta oo aysan dowlada Mareykanka iyo Warbaahintaba aysan shaacin macluumaad la xariiro dadka uu cudurka ku dhacay iyo kuwa dhintey, qaybaha bulshada ay ka soo jeedaan sida midabka, hadana wararka gobollada laga helayo ayaa ah kuwo naxdin leh.
Tiradi Jimcihi ee gobolka Milwaukee waxaa ay ahay 945 qof oo kalabar ay madow yihiin. 81% dadka Milwaukee ku dhintey ayaa lagu sheegay in ay yihiin madow.
Gobolka Michigan oo tirada guud ee Madowga ku nool ay tahay 14%, hadana dadka uu cudurku ku dhacay Madowga waxaa ay ka yihiin 35%. 40% waxaa ay ka yihiin dhimashada gobolka ay sidaasi ugu yar yihiin.
CDC, xarunta xakameynta iyo ka hortaga cudurada faafo ee mareykanka oo caadiyan daabacado tirada dadka dhintey, degaanka ay ku dhinteen, da’dooda iyo midabka ayaan shaacin midabka dadka uu aafeeyey xanuunkan, taas oo loo arko in ay ulakac ka tahay maamulka Madaxweyne Donald Trump.
Dhanka kale, shaki kuma jiro in cudurkan oo naafeeyey dhaqaalihii aduunka, islamarkaasna uu mareykanka safka hore kaga jiro wadamada uu jugta gaarsiiyey.
sadexda gobol ee Soomaalida ugu badani ay ku noolyihiin.
Minnesota waxaa uu cudurku ku dhacay 936 qof, waxaa udhintey 29 qof.
Ohio tirada guud waa 4,043. Waxaana udhintey 119.
Washington 7,984 qof ayuu ku dhacay, 338 ruuxna waa ay u dhinteen.